Izinsizakalo Zezomthetho Zesifunda Sase-Prairie Zithola Isibonelelo Sikahulumeni Se-Riot Games esingu-$10,000 Ngesikhathi Sokugujwa Kwezinsuku Zokuthuthuka kwe-Riotx Arcane - Izinsizakalo Zezomthetho Zesifundazwe sase-Prairie
by Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie | -Nov 10, 2021 | Izindaba Zamuva Nezindatshana
Izinhlangano ezingenzi nzuzo ezingama-30 emhlabeni wonke eziqokwe abadlali ngayinye zizothola izibonelelo zika-$10,000 ukuze ziqhubeke nomsebenzi wazo
I-Riot Games namuhla imemezele ukuthi i-Prairie State Legal Services ithole isibonelelo somphakathi esingu-$10,000 sokusekela izinhlelo nezinsizakalo zayo. I-Prairie State iphakathi kohlu lwabamukeli bezibonelelo ze-30 abayingxenye ye-Progress Days egqugquzelwe uchungechunge olusha lwe-TV ka-Riot, I-Arcane League of Legends.
Kuyo yonke inyanga kaNovemba, iRiot ihlanganisa imidlalo yayo nemikhiqizo yomcimbi womhlaba wonke obizwa ngokuthi i-RiotX Arcane ukuze ihlanganise abadlali nabalandeli ukuze kwethulwe uchungechunge lokuqala lwethelevishini lwenkampani. Njengengxenye yomkhosi, i-Riot ihlonipha umsebenzi omangalisayo we-Prairie State Legal Services kanye nabanye abamukeli bemiklomelo yesibonelelo sikahulumeni engenzi-nzuzo abavela emhlabeni wonke ngethemba lenqubekelaphambili ekhuthazayo.
"Lesi sibonelelo esivela ku-Riot Games besiyisimangaliso esijabulisayo," kusho uJennifer Luczkowiak, uMqondisi Wokuthuthukiswa Kwezinsizakalo Zezomthetho Zesifunda sasePrairie. “Kuyajabulisa ukuthola ukwesekwa okwengeziwe ngonyaka lapho silindele ukwanda okukhulu kwesidingo samakhasimende ngenxa yemiphumela eqhubekayo ye-COVID-19. Le mali izosiza abasebenzi bethu ukuthi bagcine abantu emakhaya, bashiye izimo ezihlukumezayo, futhi bathole izinzuzo abazidingayo ukuze bavikele izidingo zabo zobuntu eziyisisekelo. Sibonga kakhulu kumdlali osiqokile kanye nakuRiot Games ngokusikhetha. Ngiyabonga!"
Ehlobo, u-Riot umeme abadlali abavela emhlabeni wonke ukuthi babe 'amandla okwenza okuhle' futhi baqoke inhlangano engenzi nzuzo kanye/noma indawo yembangela ebibalulekile kubo. Ngokuhambisana nokuqokwa, abadlali bacelwe ukuthi babelane ngobufakazi ukuze bachaze ukuthi kungani lesi sizathu sibalulekile kubo nokuthi siwuthinta kanjani umphakathi wangakubo. Okuthunyelwe okungaphezu kuka-19,000 kuqhamuke kubadlali emhlabeni wonke kanye nethimba lomthelela kumphakathi le-Riot, ngosizo lozakwethu i-ImpactAssets ne-GlobalGiving, bahlolwa futhi bakhetha izinhlangano ezingenzi-nzuzo ezingu-30 ukuze bathole iminikelo engu-$10,000. Lezi zinhlangano ezingenzi-nzuzo ezinomthelela ophezulu zisekela inhlobo ebanzi yamazwe futhi zibangela izindawo, okuhlanganisa inhlangano evela eNew Zealand esekela ukuphila kahle komphakathi kanye nenhlangano engenzi-nzuzo evela e-Brazil elwela amalungelo abantu abakhubazekile ngokobuhlakani.
“Kuwo wonke umlando kaRiot sibone kaningi abadlali behlangana njengomphakathi owodwa ukuze basekele imiphakathi emincane abayingxenye yayo,” kusho uJeffrey Burrell, uMqondisi weSocial Impact. “Ngifuna ukudumisa lapho kufanele ngempela futhi lokho kubadlali. Kubaluleke kakhulu uma sibiza abadlali kanje futhi sithola impendulo emangazayo. Besingeke sikwazi ukwenza lo msebenzi ngaphandle kwabo.”
I-Riot Games Social Impact Fund injini ye-Riot engenzi nzuzo yemizamo yethu ehlangene yomthelela womphakathi womhlaba. Nge-Social Impact Fund, ngokubambisana ne-ImpactAssets futhi ephethwe yi-GlobalGiving, i-Riot ikwazile ukusabalalisa lezi zibonelelo emazweni angaphezu kwe-18 emhlabeni jikelele. Ngokukwazi ukubandakanya ama-NGO asendaweni esebenzela izidingo zomphakathi wendawo, i-Riot iyakwazi ukusekela ngokuqondile izimbangela nezintshisekelo zomphakathi wabo wabadlali kulokho okubaluleke kakhulu kubo.